တေးဂီတကိုအခမဲ့ download လုပ်ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခု Gadget သတင်း
တေးဂီတကိုအခမဲ့ download လုပ်ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခု
တေးဂီတ streaming ဝန်ဆောင်မှုများသည်ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့နေသော်လည်း MP3 စာကြည့်တိုက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလိုသောလူများရှိသည်။ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုပေါ် မူတည်၍ သင်၏ကြိုက်နှစ်သက်သောတေးဂီတကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းသည် USB မှတ်ဉာဏ်သို့မဟုတ် SD ကဒ်ကဲ့သို့သောမီဒီယာသို့ကူးယူခြင်းနှင့်ကားထဲတွင်ပျော်မွေ့ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ။ ဒါကြောင့်ငါတို့မှာတရားဝင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွေရှိတယ် MP3XDတစ်ဦး ဝဘ် အတွက် ကြား y တေးဂီတကိုအခမဲ့ download ပြုလုပ်ပါ.
MP3 တေးဂီတကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းသည်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုနီးပါးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အငြင်းပွားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ များစွာသောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် download အစီအစဉ်များကိုပိတ်ထားပြီ ထိုအကြောင်းများကြောင့်ထိုနှစ်များအတွင်း eMule (သို့) Ares ကဲ့သို့ကျော်ကြားသောဖိုင်များကို download လုပ်သည့်ပရိုဂရမ်များသည်ထိုအချိန်မှ စ၍ အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည် ပိုပြီးရှုပ်ထွေးလာတယ် သင်ရှာချင်သောအရာကိုရှာဖွေပါ။ ရက်အနည်းငယ်အကြာကငါတို့သည်သင်တို့ကိုပြောသည် Deezer မှဂီတကိုဘယ်လို download လုပ်မလည်း, ယနေ့ငါတို့အားယနေ့ငါပြောမည် အခြားကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူနည်းလမ်း.
MP3XD သည်အခမဲ့သီချင်းများနားထောင်ရန်နှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာတွင်ရှိသောသီချင်းများမှမဟုတ်။ တကယ်တော့ဆာဗာ MP3XD တွင်သီချင်းများသိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါသို့သော်၎င်းသည်ရှာဖွေရေးယန္တရားမျှသာဖြစ်သည် သီချင်းများကို MP3 format ဖြင့်ရှာဖွေပါ အင်တာနက်ပေါ်မှာတည်ခင်း are ည့်ခံသော။ ဟုတ်တယ်၊ မင်းဒါကိုစဉ်းစားနေတယ်။ el Google ဂီတ၏။
သင်သိမ်းဆည်းထားလိုသောသီချင်းကို download လုပ်ရန်သင်မည်သည့်ခြေလှမ်းများလှမ်းရမည်ကိုသင်စဉ်းစားနေနိုင်သည်။ ကောင်းပြီ အဆင့်များအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်:
ပထမ ဦး ဆုံးအရာသိသာသည် ကိုရယူပါ MP3XD ၀ ဘ်ဆိုဒ်.
ပြီးတာနဲ့အထဲမှာကျနော်တို့ကရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် ရှာဖွေရေးအကွက်ငါတို့တတျနိုငျသ သော့ချက်စာလုံးများရိုက်ထည့်ပါ ကဲ့သို့သော ဘှဲ့ သီချင်း, အနုပညာရှင်သို့မဟုတ်အယ်လ်ဘမ်၏။
ရှာဖွေရေးခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် ၀ က်ဘ်ကပြန်တင်မည် အားလုံးရလဒ်များကိုပြသပါလိမ့်မယ် ရရှိနိုင်ပါ။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအခြားစာမျက်နှာတစ်ခုသို့ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည် ကူးယူရန်ရွေးချယ်စရာများ။ ဒီမှာလျှို့ဝှက်ချက်ကစမ်းသပ်တာထက်ပိုပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ပထမ ဦး ဆုံး option ကိုများသောအားဖြင့်အလုပ်ဖြစ်တယ်အမှားအယွင်းများရှိသော်လည်း ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည်။
ရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သာလုပ်ရန်လိုအပ်သည် အဆင့်တွေကိုလိုက်နာပါ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြသ။ ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရ၊ များသောအားဖြင့်အပြာရောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။MP3 ဒေါင်းလုပ်»ဒီတော့ဝဘ်ကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းပေးပါတယ် စောင့်ဆိုင်းရသောအချိန် စက္ကန့်အနည်းငယ်, ပြီးတော့ download လုပ်ရန်စတင်ရန်ထပ်နှိပ်ပါ.
သီချင်းကို download လုပ်ပြီးတာနဲ့၊ နှစ်သက်ရာကိုခံစားပါ.
အခြေခံအားဖြင့်သူတို့ရဲ့စည်းကမ်းချက်များမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း၊ သင်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပြသမှုသည်၎င်းတို့အတွက်တာဝန်မရှိပါ။ ဒါ့ကြောင့် MP3XD က MP3 ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေသောသီချင်းများကိုအခမဲ့နားထောင်ရန်နှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ မည်သည့်ဥပဒေကိုမျှမချိုးဖောက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်း ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်, ဥတုတစ် ဦး မှာပေါ်ပေါက်ပါတယ် မြန်နှုန်းနှင့်အင်တာနက်အရှည်နှင့်အနံကိုရှာဖွေသည့်အခါသီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုရှာ။ မတွေ့ပါကရှားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » တေးဂီတကိုအခမဲ့ download လုပ်ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခု
မြွေသည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၏ AR ကင်မရာသစ်မှပြန်လည်ထွက်ခွာသွားသည်